केदारनाथको शिर डोलेश्वरमा भक्तजनको भिड, मन्त्री भट्टराईले पनि गरे शिवको दर्शन – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार १९:११
केदारनाथको शिर डोलेश्वरमा भक्तजनको भिड, मन्त्री भट्टराईले पनि गरे शिवको दर्शन
एजेन्सी, भक्तपुर । साउन महिनाको अन्तिम सोमवार केदारनाथको शिर डोलेश्वरमा भक्तजनको भिड लागेको छ । विहान तीन वजे देखि भगवान शिवको दर्शनका लागि सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो ।
साेमबार बिहान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रि योगश भटराईले डोलेश्वर महादेवको दर्शन गर्नुभएको छ । दर्शन पछि बोल्दै मन्त्री भट्टराईले धार्मिक, प्राकृतिक देखि अन्य सम्पादको संरक्षण गर्न सके भक्तपुरको बिकासमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो । केदारनाथको शिर डोलेश्वर मन्दिरका धार्मिक तिर्थ स्थलका रुपमा बिकास हुँनु राम्रो भएको बताउँदै मन्त्री भटराईले मन्दिरको बिकासमा तीनै तहको सरकारको सहयोग रहने बताउँनु भयो ।
PREVIOUS Previous post: गर्मी मौसममा किन मेवा खाने ? यस्ता छन् फाईदै फाइदा !
NEXT Next post: पर्यटन : श्री एयरलाइन्सको वनारसमा परीक्षण उडान